IHuawei Nova 4 iya kuziswa ngoDisemba 17 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
IHuawei Nova 4 sele inomhla wentetho
Kwithuba elingaphezulu kweveki edlulileyo yatyhilwa ubukho beHuawei Nova 4. Yifowuni yokuqala yohlobo lwesiTshayina oluya kufika kunye ikhamera yangaphambili efakwe kwiscreen, Inguqulelo entsha ephuhliswayo yi-Samsung kwezixhobo zayo ezininzi namhlanje. Kwaye ayikokuphela kwexesha esivile ngalo malunga nesi sixhobo kumenzi waseTshayina.
Ukusukela kwiintsuku ezimbalwa kamva, imifanekiso yokuqala yesi sixhobo yafika, esele siqokelele kweli nqaku. Ngale ndlela sinokufumana umbono ocacileyo woyilo esi siza kuba nalo. Ekugqibeleni, Umhla wokungeniswa sele uqinisekisiwe yale Huawei Nova 4.
Kwindawo ezivuzayo zangaphambili malunga nesi sixhobo, bekusele kukhankanyiwe oko intetho yakhe yayizakwenzeka ngenyanga kaDisemba. Into esele iqinisekisiwe ngoku njengoko umhla wokungeniswa kwayo ngokusemthethweni ubonakalisiwe. Kwiiveki ezimbalwa sinokufumana le fowuni.
Ukususela Iya kuba ngoDisemba 17 xa iHuawei Nova 4 iziswa ngokusesikweni. Iya kuba ngumnyhadala wentetho oza kwenzeka e-China. Yintoni lo mhla, phakathi enyangeni, onokusixelela yona kukuba kungafuneka silinde de kuqale i-2019 ukuba ifowuni ivulwe kwintengiso.
Nangona kuya kufuneka silinde kude kube yinkcazo yayo ukuze ufumane okungakumbi. Ngaphandle kwale khamera yakhelwe kwiscreen, Asinayo idatha kwiHuawei Nova 4. Uphawu lwaseTshayina alukhange luthethe nto, kwaye akubangakho kuvuza malunga nale nkcazo yokugqibela. Mhlawumbi kwezi ntsuku kude kube kukuboniswa kwayo kuya kubakho idatha.
Okucacileyo kukuba ikhamera ibethelelwe kwiscreen iya kuba yenye yeendlela ezikwi-Android zonyaka olandelayo. Kwaye okwangoku, iya kuba yile Huawei Nova 4 ethatha iwonga lokuba ngowokuqala kwimarike ngalo msebenzi. Ucinga ntoni ngesi sixhobo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » IHuawei Nova 4 sele inomhla wentetho
Le yi-Samsung Galaxy S10 Plus: isihluzi esitsha sokuyila uyilo kunye neekhamera ezi-5
I-Spotify iyakusivumela ukuba singenise ilayibrari yethu kwisicelo se-Android